Mitombo ny olana, ary ny vahaolana ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
10 millions de filles supplémentaires risquent le mariage forcé il y a 13 heures
Tsy misy fanovana governemanta ato ho ato. Tsy laharam-pahamehana izany. Fa midika koa izany fa afa-po amin’ny fiasan’ny governemanta ny filoha hatramin’izao. Vita izany ny tomban’ezaky ny minisitra samihafa dia miabo ny tarehimarika. Na tsy miasa aza izy ireo fa manao « oui, oui » amin’izay lazain’ny filoha dia « miabo hatrany ny tarehimarika ». Toy ilay mpijery baolina eny Mahamasina ny rehetra, « jereo kely ny tableau ».
Nanjavona any Afrika atsimo ny volamena 73,5 kg. Tsy misy tompon’andraikitra ny governemanta fa ACM io. Afa-po ny filoha satria mandeha ny fanadihadiana. Mety ho very an-javony ny fanasaziana ireo tena tompon’antoka satria ny « Mafia » matanjaka ary mety misy manam-pahefana. Dia afa-po daholo. Efa eny Tsiafahy ny pilote, ny irakiraka, ry Rakotomalala mianakavy, dia mahafa-po izany, fa ny « tompom-pahefana sy tompon’ny vola » mitsotra eo ambony seza lava. Mahavita mirehareha aza.
Dia toy izany hatrany, ireo tsy manam-pahefana dia any am-ponja no manao fety. Tsy resaka mpanamory fiaramanidina na tompon’ny orinasa STA, na ny ACM ihany, fa ny raharaha fanodinkodinam-bola any amin’ny minisitera any, toy ilay 8 miliaran’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ohatra, ny ady amin’ny valan’aretina, ny resaka fangalarana sy fibodoana tany hananana taratasy mazava maimaim-poana… Ny lehibe misiotsioka, fa ny kely manefa.
Dia toy izany koa ny fiatrehana ny olana any Atsimo. Napetraka ny CCOK, saingy vao mainka ny olona toy ny « nasesika handao ny taniny ». Dia fanjakana mitan-damba sy mitazam-potsiny no misy fa tsy mahafehy ny fitrangan-javatra, mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Etsy amin’ny tobim-piantsonan’ny fiara etsy Andohatapenaka vao hita ny mpitsoa-ponenana? Vonjy tavan’andro ny fandraisana an-tanana fa tsy misy vahaolana velively. Sao dia misy miketrika ihany ny fandosiran’ny olona any Atsimo mba hampidirana olona vaovao mpitrandraka any? Manan-karena an-kibon’ny tany manko iny faritra iny, saingy tsy nampandroso azy ny hareny. Teraka ho azy ny fahantrana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny sandam-bola mitotongana, ny fiankinan-doha amin’ny any ivelany…
Ny ady an-trano manapotika ireo firenena manana harena an-kibon’ny tany toa an’i Congo sy ny faritr’i Katanga, manodidina ny Lac Kivu (Rwanda, Burundi, Congo, Angola, Burkina faso…) no nahitana olona nitsoa-ponenana toy izao. Tsy ady no misy any Atsimo, saingy ady mba ho velona kosa. Dia miandry ireo mpamatsy vola isika hamaha ny olana ato an-trano.
Mahantra ara-politika ny firenena. Mahantra ara-pisainana. Mahantra ara-pitantanana. Tsy olan’ny hain-tany no mampijaly olona, fa ny olan’ny tsy fahaizana mifehy ny rano. Tany efitra anie Dubaï manintona ny mpitondra antsika io e, saingy tany efitra manan-karena amin’ny rano. Fa eto amintsika mbola tsy ritra i Mandroseza, mbola tsy maina ny ony, mbola manana tahiry i Tsiazompaniry, fa na Antananarivo renivohitra aza, maina hatrany am-bilany. Olana tsy vao omaly izany, saingy afa-po ny filoha fa miasa tsara ny olona napetrany rehetra. Ilay « intelligence collective » toy ilay « immunité collective » nateraky ny virus no maina tarangana, dia finaritra amin’ny vonjy tavan’andro sy ny tandrametaka iraisam-pirenena ny rehetra. Fahadisoan-kevitra ny manantena fanjakana tsy afa-mamaly akory na dia izay filana fototra ho an’ny firenena aza, mba tsy hiresahana ny filaminana fototra ho an’ny Malagasy.
Covid-19 et mariage d'enfants : 10 millions de filles supplémentaires risquent le mariage forcé - il y a 13 heures
Matoan-dahatsoratra : Sisiny sy ny afovoany - il y a 12 jours
Matoan-dahatsoratra : Dinika momba ny fahefana amin’ny tany demokratika - il y a 17 jours